News in Zimbabwe
Filter By Region : Zimbabwe
Production of potatoes in sacks has proved to be a non-profitable venture with farmers registering zero to one kilogram per plant, according to Zimbabwe Commercial Farmers Union (ZCFU) president Mr Wonder Chabikwa
Sack Potato Farming in Zimbabwe expanding
Sack potato farming continues to make headway in Zimbabwe.
Zimbabwe successfully growing potatoes in sacks
A revolutionarised way of growing potatoes in sacks is set to significantly transform the lives of women and the youth from Harare South in Zimbabwe who have embraced this method in a big way.
The horticulture industry of Zimbabwe is calling for higher import tariffs on imported horticulture products to avert the collapse of the local industry.
Zimbabwe: Seed Potato Farmers frustrated by High Costs of Production
Beneficiaries of the land reform programme who are producing potato seed in Nyanga (Zimbabwe) have expressed concern over high costs of production. This, the farmers say, was making it difficult for resource-poor but interested farmers to break into t...
Vegetable traders and vendors in Bulawayo (Zimbabwe) are fuming over the ban on South African potatoes